Banyere The Tailoress – The Tailoress
Womendị ịkwa akwa pụrụ iche maka ụmụ nwanyị, childrenmụaka na ụlọ! Chọta usoro ịkwa akwa dijitalụ PDF dị ibudata ma nweta ozugbo!
Womenswear PDF akwa ịkwa akwa bụ na nha UK 4-18 (eserese eserese gụnyere iji nyere gị aka ịchọta ogo gị). Wearmụaka PDF ịkwa akwa ụkpụrụ na nha ụmụ ọhụrụ 14 afọ!
The Tailoress na mbụ kere na-eme ihe dị ka ihe ọmụma mgbe n'ihi na ndị mmadụ na-achọ akwa akwa ọmụma nakwa dị ka otú isonyere m ọmụmụ na m na-enye mpaghara. Ya kemgbe ahụ toro m oké njọ ụkpụrụ ahuhu na awade m onye tinyekwa ka m kere eke ga n'ihu karịa nnọọ m akwa akwa studio. Oge ọ bụla m na-ere a ụkpụrụ m obi ụtọ na-eche otú m echiche na-aghọ onye ọzọ na otú ha nwere ike ịkọwa ya.
M na-agbalị na-enye dị ka ọtụtụ ihe-nkọwa na izi ezi ka onye ọ bụla nke m nakawa etu esi na ha Nkuzi. Onye ọ bụla nlereanya nwere zuru agba oyiyi na nkowa-eso ndị CAD mmasị ụkpụrụ faịlụ. Inwe ọtụtụ mụọ ụkpụrụ ọnwụ na grading na ọ debara aha ha site n'aka ihe karịrị 10 afọ, Obi siri m ike na m ike nke ime ka ndị ọzọ a kpọmkwem na-recreating ha.
M ga-enwe obi ụtọ inyere onye ọ bụla bụ onye zụtara a ụkpụrụ na choputara okwu ma ọ bụ nsogbu m na-enwe emebe kpọmkwem ndị ọzọ ihe ọ bụrụ na achọọ. Ya mere, biko chere free ịkpọtụrụ m ma ọ bụrụ na ị ga-achọ iji tụlee ihe ọ bụla!